Sida loo dooxi YouTube audio fudayd
> Resource > YouTube > Sida loo RIP Audio ka YouTube
Waxaad heli kartaa fududahay in nooc kasta oo maqal ah ka YouTube helaan online. Laakiin waxa haddii aad rabto in ay dhagaystaan ​​audio aad marka aanad lahayn internet ama aad rabto in aad ku gubi audio ay u CD ah in ay weligood u sii? Waxaa laga yaabaa inaad dooxi audio ka YouTube. Halkan waa qalab fiican si ay u caawiyaan. Streaming taariikhqorihii Audio si fudud dooxi karo qayb ka mid ah audio ee video YouTube ah oo aan khasaaraha tayo leh. Markaas waxaad ku wareejin karaa audio ka dooxay si qalabka aad la qaadi karo sida iPod, oo waxay qaadan on go ah. Aan ku sii quusidda si ay u arkaan sida loo isticmaalo.
1 Ku rakib YouTube ripper ka audio
Click Download icon kor ku soo bixi barnaamijka iyo rakibi on your computer. Waa in aad dooratid mid ka mid sax ah si aad u computer. The version Windows iyo Mac leeyihiin howlgallada la midka ah. Oo annaguna waxaannu kugu qaadan doontaa version Windows sida tusaale.
2 Rip YouTube audio si fudud
Orod barnaamijka dib markii la rakibey. Raadi button Record ah ee bidixda xagga kore. Waxaa Riix oo u daaya ee asalka ah.
Markaa waa inaad aadaa youtube.com si aad u hesho audio aad rabto. Daqiiqo ayaa aad u ciyaaro audio ah, barnaamijka bilaabi doonaan in ay dooxi audio ka YouTube.
Marka audio YouTube ka baxayo ciyaaro, waxaad ka heli kartaa Maktabadda. Muujinta audio iyo guji Add to Lugood hoose. Markaas audio ayaa la keeno si ay playlist SAR ku Lugood aad ka heli karto. Geli qalabka aad la qaadi karo sida iPod iyo waafajinta la Lugood.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaaro aaladaha kale ee la qaadi karo sida taleefanka Samsung ah, waxaad xaq u-riixi kartaa audio si aad u ogaato meesha lagu kaydiyo dibna wareejiyo telefoonka gacanta Samsung.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ku gubi audio ee CD ah, oo aad isticmaali karto sidii Lugood gubi ah CD lacag la'aan ah.
Iyada oo ay taasi YouTube ripper audio, waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa ringtones out of audio ah. Marka riixaya icon dawan ee u dhow magaca audio ee, waxaad ka heli kartaa bitmap ah ayaa salka ku jira. Jar qayb ka mid ah oo aad jeceshahay in bitmap iyo badbaadin in lagu shubaa telefoonada aad. Iyada oo dhan audio ka dooxay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad iyaga guraan. Samee playlists barnaamijka oo maqal ah ku riday si ay u playlist kala duwan. Qaybsiga Quick of audio sidoo kale waa suurto gal. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad guji icon Facebook markaas aad si fudud la wadaag saaxiibadaada kartaa audio.
Hawlaha badan fanaaniinta cusub, sax? Waa maxay sababta aan kala soo bixi barnaamijka iyo bilowdo hadda ka dooxeen YouTube audio?